ဘယ်လို ပညာတတ်သားသမီးတွေ လည်းဗျာ….. အ​မေဟာအ​မေပါပဲဒီလိုမစွန့်​ပြစ်​သင့်​ပါဘူး – ရှအေလငျး
မနေ့က ​နေ့လည်​က၆၈လမ်းနှင့်​မြဝတီမင်းကြီးလမ်း​ထောင့်​ စန်း​သော်​တာဆီစက်​​ရှေ့မှာအဖွားတစ်​​ယောက်​ကိုကားတစီးမှလာ​ရောက်​စွန့်​ပစ်​ခဲ့ပါတယ်​
အဖွားနာမည်​က​ဒေါ်ဝိုင်း အသက်​ ၈၄နှစ်​ပါ အဖွား​ပြောပြတဲ့အတိုင်းသားသမီး​တွေကိုလိုက်​စုံစမ်း​ပေးခဲ့ပါတယ်​ ချမ်းမြသာစည်​မြို့နယ်​ ထဲ​ရော ပြည်​ကြီးတံခွန်​မြို့နယ်​ ထဲပါစုံစမ်း​ပေးခဲ့ပါတယ်​
သားသမီး​တွေနဲ့အဆက်​သွယ်​ရလို့ စ ရပ်​ကွက်​ရုံးကိုအပ်​ခဲ့ပါတယ်​ ခု ချိန်​ထိသားသမီး​တွေကလာမ​ခေါ်​သေးဘူးလို့ဖုန်းအဆက်​သွယ်​ရခဲ့ပါတယ်​ အ​မေဘယ်​​လောက်​ဆိုးဆိုး အ​မေဟာအ​မေပါပဲဒီလိုမစွန့်​ပြစ်​သင့်​ပါဘူး ဒါ​တောင်​သားသမီး​တွေကပညာတတ်​​တွေ​နော်​ 31.8.2018
Credit . War War
မနကေ့ နလေ့ညျက၆၈လမျးနှငျ့မွဝတီမငျးကွီးလမျးထောငျ့ စနျးသျောတာဆီစကျရှမှေ့ာအဖှားတဈယောကျကိုကားတစီးမှလာရောကျစှနျ့ပဈခဲ့ပါတယျ
အဖှားနာမညျကဒျေါဝိုငျး အသကျ ၈၄နှဈပါ အဖှားပွောပွတဲ့အတိုငျးသားသမီးတှကေိုလိုကျစုံစမျးပေးခဲ့ပါတယျ ခမျြးမွသာစညျမွို့နယျ ထဲရော ပွညျကွီးတံခှနျမွို့နယျ ထဲပါစုံစမျးပေးခဲ့ပါတယျ
သားသမီးတှနေဲ့အဆကျသှယျရလို့ စ ရပျကှကျရုံးကိုအပျခဲ့ပါတယျ ခု ခြိနျထိသားသမီးတှကေလာမချေါသေးဘူးလို့ဖုနျးအဆကျသှယျရခဲ့ပါတယျ အမဘေယျလောကျဆိုးဆိုး အမဟောအမပေါပဲဒီလိုမစှနျ့ပွဈသငျ့ပါဘူး ဒါတောငျသားသမီးတှကေပညာတတျတှနေျော 31.8.2018
လွန်ခဲ့တဲ့ (၈၂၄) နှစ်က ဘဝဟောင်းကိုမှတ်မိနေ့ဘူတန်တော်ဝင်မင်းသားရှင်ငယ်လေး .
“အနုပညာကို ချစ်လွန်းလို့ ရှေ့နေအလုပ်ကို စွန့်လွတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ ကျော်ကျော်နန္ဒ”
“အခိုး အငွေ့များတွင် ဒြပ် ၆၄ မျိုးပါဝင်သဖြင့်် အမွှေးတိုင်းနံ့သည်လည်း ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ဟု တရုတ်သုတေသီများဆို”
“အကူအညီကောင်းများရလတ္တံ့သော အင်္ဂါနေ့သားသမီးများအတွက် အတွက် ၁၃၈၁-ခုနှစ်၊...
ဆေးကြောင်တဲ့နေတဲ့ အဖေဖြစ်သူရဲ့လုပ်ရပ်ကြောင့် အပြစ်မဲ့ကလေး အသက်ပါပေးလိုက်ရတယ်😦
ထူးထူးခြားခြား လယ်ကွင်းပြင်မှာ မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ လူဝင်စား သတို့သားနဲ့...
ပရိသတ်တွေအတွက် ၁၆ သိန်းကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် iPhone Xs မဲဖောက်ပေးမယ့်...